Mụ amaala na-ahụta kamera ndị a na - eyi - OMG Solutions
Citizensmụ amaala ụmụ amaala igwe eji eyi
Igwefoto ndị ahụ na-eyi bụ ihe na-ekpo ọkụ ka ahụrụ mbuga ha na United States of America na UK n'ime afọ ole na ole gara aga. Ọtụtụ ndị ajụọla ọrụ ọ rụrụ n'ịgbado mmanye. Ọ dị mma, enweghị mgbagha na cams ndị a enyerela aka belata ọnụ ọgụgụ mpụ. Ma gịnị ka ndị mmadụ na-eche banyere cams ndị a na echiche ha banyere ha bụkwa ajụjụ ga-echebara echiche. Isiokwu a ga-ekpuchi nkọwapụta nke ọma ihe ndị bụ ghọta nwa amaala gbasara kamera eyi.
Citizzọ echiche ụmụ amaala nke ara Worn Cameras:
A na-eji kamera ndị a na-eyi n'ahụ (mgbe nke a gasịrị BWCs) iji jide ihe ndekọ ọdịyo na vidiyo nke zutere n'etiti ndị uwe ojii na ụmụ amaala. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị ọrụ uwe ojii etinyela BWC n'ọtụtụ mba gụnyere United States, Australia, na mba Europe. A na-ejikarị BWC eme ihe iji gbochie omume ịkpa ókè nke ndị uwe ojii na mkparịta ụka na-eme ihe ike (ntụgharị, ogbugbu ndị uwe ojii nke ụmụ amaala), na-akwalite mmekọrịta nke etiti n'etiti ndị uwe ojii na ụmụ amaala, ma kwalite ntụkwasị obi ụmụ amaala na ndị uwe ojii.
Mmetụta maka mmepe anya:
A hụrụ mmetụta mmepeanya n'etiti ọha mmadụ. Nnyocha na-egosi na o yikarịghị ka ndị mmadụ hà ga-agba ọsọ n'ihi na ha maara na a na-etinye ha na teepu. Omume nke ndị mmadụ n'otu n'otu nwere mgbanwe dị ukwuu n'ebe ndị uwe ojii nọ mgbe nkenye BWCs. Enwere ezigbo mkpesa banyere ndị isi na-ese ese foto. Anyị na-ekwu okwu na iwu nke 88 ma ọ bụ 90 percent. ndị isi anaghị arụ ọrụ mkparị ma ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị, ụmụ amaala anaghị eme ihe ike ma na-eguzogide ọgwụ. Nke ahụ dị ịrịba ama n'ezie.
Tụkwasị ndị uwe ojii:
Achọpụtara nnukwu ntụkwasị obi ndị uwe ojii na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ka a na-enyocha ndị uwe ojii, ndị mmadụ na-enwe nchekwa na gburugburu ndị uwe ojii. Okwu ikpe ndị uwe ojii na-agbadata agbadala nke ukwuu. Igwefoto ahụ na-eyi n’iru ekerela oke ọrụ na iwulite iwu kachasị mma na usoro gburugburu anyị.
Mbelata na nrụrụ aka:
Ka a na-enyocha ndị uwe ojii mgbe niile, iri ngo na ụdị nrụrụ aka ndị ọzọ na ngalaba uwe ojii belatara n'ụzọ doro anya. Ọhaneze na-ahụta ya dịka ha nwere ike idozi nsogbu ha n’enweghi ego ha ji akpata ego dị ka ihe iri ngo.
Ihe ndị a bụ ezigbo ihe akaebe na-egosi na ọha na eze kwadoro ngwa ndị a ka ha na-ahụ na nchekwa ha na ahụike na ego. Nchịkọta zuru oke banyere echiche ụmụ amaala banyere igwefoto ahụ na-eyi ahụ bụ Michael D. White, Natalie Todak, Janne E. Gaub.
Nnyocha zuru ezu:
Ebumnuche nke akwụkwọ a bụ iji mata echiche nke igwefoto nwere uwe (BWCs) n'etiti ụmụ amaala nwere ndị uwe ojii dekọrọ BWC, yana ịchọpụta ikike nke mmepe obodo na omume ụmụ amaala. Site na June rue November 2015, ndị ode akwụkwọ duziri ụmụ amaala 249 na Spokane (WA) nwere ndị uwe ojii dekọrọ BWC na nso nso a. Ndị zara ajụjụ nwere afọ ojuju maka etu esi mesoo ha n'oge nnọkọ ndị uwe ojii na, n'ozuzu ha, nwere echiche ziri ezi banyere BWCs. Agbanyeghị, naanị 28 pasent nke ndị zaghachiri maara n'ezie BWC n'oge nzukọ ha. Ndị ode akwụkwọ ahụ chọpụtakwara ntakịrị ihe na-egosi na mmepeanya mana ha dekọtara ọmarịcha njikọ dị n'etiti nghọta nke BWC yana nkwalite ziri ezi nke usoro iwu.
Nri aru nke ndi nwatakiri ahu di egwu - imebi ihe nzuzo
O doro anya na enwere oge mgbe ụmụ amaala nwere atụmanya nke nzuzo nke nwere ike imebi site na iji onye uwe ojii jiri igwefoto a na - eyi - nyocha nke nwatakịrị, mkparịta ụka nke onye metụtara iyi egwu mmekọahụ, dịka ọmụmaatụ. Ikekwe otu onye uwe ojii na-agwa onye na-enye ya ozi nzuzo ma ọ bụ onye ọzọ na-anwa inweta ọgụgụ isi na mpụ. Mgbe edere ihe omume ahụ, ọ na-aghọ, n'ọtụtụ ebe, akwụkwọ ọha na eze nke ụmụ amaala nwere ike ịrịọ, site na pịa na n'ezie ndị ọka iwu.
O doro anya na ndị uwe ojii na ndị uwe ojii anabatabeghị teknụzụ a. Ha nwere nchegbu gbasara mgbe igwefoto ga-agbanye ma pụọ, mgbe ndị nlekọta nwere ike ịga ma nyochaa eserese. Ma na mgbe ahụ, ikekwe nke kachasị mkpa, kedu ka ị ga-esi chekwaa data dị ukwuu nke vidiyo nke ndị isi na-eyi igwefoto ndị a na-ewepụta?
Tokpụrụ Maka Nlekọta:
A na-enwe arụmụka gbasara mgbe igwefoto kwesịrị ịgbanye ma ọ bụ olee mgbe ha kwesịrị ịgbanyụ. Kinddị data dị a gatheraa ka ha ga-akpọkọta na ụdị data ha kwesịrị ịchekwa? Ajụjụ ndị a bụ ezigbo nkwekọrịta, nzuzo nke ụmụ amaala ekwesịghị emebi emebi oge ọ bụla ezumike kwesịrị idekọ. Nye nwere ike ịbanye na ndekọ ahụ? Onye ọka ikpe nwere ike iji akaebe ahụ mee ihe n'ụlọ ikpe? Ọ dị mma, azịza ndị a niile azabeghị. Ndị ọrụ nchekwa iwu na-arụ ọrụ ugbu a na-echepụta usoro ga-adabara onye ọ bụla. Offọdụ ụkpụrụ a na-eso ugbu a bụ:
Na agbanyeghị, kedu usoro agbadoro maka iji kamera eyi, otu ihe ndị ụlọ ọrụ mmanye iwu kwesịrị iso bụ na ekwesighi imebi nzuzo nke ọhaneze. Ihe niile ekwuru site na ntụkwasị obi kwesịrị ịdị na nzuzo. Anyị nwere olile anya na ngwaọrụ ndị a na-enyere ndị uwe ojii obodo anyị na ndị ọrụ obodo ndị ọzọ aka iji wuo ụwa nke enweghị mpụ karịa ka enwere ike.
Nzuzo 5428 2 Echiche Taa